Zororo remhuri muEurope rinogona kunakidzwa kwazvo kuvabereki nevana veese mazera kana uchironga zvakanaka. Europe ndiyo nyika yemizinda uye mabhiriji, mapaki akasvibirira, uye inochengeterwa uko vasikana vadiki nevakomana vanogona kunyepedzera kuve machinda uye machinda kwezuva rimwe. Pane nzira huru dzekukwira makomo uye yakawanda nzvimbo yemitambo mune yakakura kunze, asi kufamba nevana kunonetsa.
Chakavanzika kumhuri huru zororo ndipo apo mhuri yese painenge iri mubhodhi uye ichifara. Europe izere zvinoshamisa zvinoshamisa, zvinokwezva, mapaki evaraidzo, nenzvimbo zvekushanyira, uye kuita kuti vana vako vatore chikamu mukuronga rwendo rwako kuenda kuEurope kunozova zororo reroto. Ita tsvagiridzo yako pamberi, sarudza zvinokwezva zvaunoda kushanyira, uye mavara evana vako angade, uyezve ita kuti vana vatore 3-4 zvinokwezva pane izvo zvinyorwa. Nenzira iyi munhu wese anofara uye ane chimwe chinhu chekutarisira zuva rega rega.
Mapaki mazhinji anowanikwa Via chitima kubva ku guta guru nzvimbo. Kana iwe ukaronga pamberi uye uuye wakagadzirira, hapana chikonzero nei usingafanire kunakidzwa nekunze kwekunze uye kunakirwa nemhepo nyowani, masango, nemapaki ane theme.
Iwe unofanirwa kuziva kuti maresitorendi muEurope haape vana chikafu, saka ndezvevakuru’ migove yemunhu wese. Izvi zvinonyanya kukosha kuti utarise semuenzaniso kana uri kuenda kuItari, haungawane pizza yehukuru hwevana kana zvikamu zvepasta, saka gadzirira.
Iwe unogona kuzviita zvese iwe mepu uye mabhuku uye maapp, asi kujoina chikepe kana kufamba kwekufamba kwakanyanya. Mumaguta mazhinji eEurope kune guta rakasununguka kufamba nzendo pamwe negwara remunharaunda. Uyu mutungamiri anofara acharatidza uye ataure zvakavanzika zvakachengetedzwa zveguta, pasina iwe kurasika mumigwagwa 'maze. Iye mutungamiri anonongedzerawo maresitorendi emuno nemaseti emasikati uye nekupa rairo yakanakisa pane zvekuita muguta.
Mazhinji maguta eEuropean achave neakajeka uye anoyevedza carousel mu main city square. Panzvimbo yekumhanyira kune inotevera saiti, mira, uye bvumira vana vadiki kuti vaende kunokwira kwakawanda sezvavanoda. Kunakidzwa nekukwira carousel kana iyo Eiffel Tower iri kumashure kwako, inguva isingakanganwike yevana vadiki uye vakuru.
Kungoti uri muSwitzerland, hazvireve kuti zvese zvichafamba mushe parwendo rwemhuri yako. Paunenge uchifamba nevana, chero chinhu chinogona kuitika, kunyangwe muEurope, saka ive shuwa yekusiya nguva yemahops parwendo. Ita nguva yezvishamiso zvisina kurongwa, kunonoka, shanduko kuzvirongwa nekutenda kune grumpy kiddos, uye uvepo uye uve wakagadzirira kugadzirisa.
Iwe unoda here kupinza yedu blog positi "10 Akanakisa Matipi Ekuzorora Kwemhuri MuEurope" pane yako saiti? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https://www.saveatrain.com/blog/tips-family-vacation-europe/?lang=sn ‎- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
Europewithkids www yemhuri Yavanodaripnyo familyvacation traintravelwithkids